Showing १९१-२०० of ९५३ items.
"पहिले उनीहरू कम्युनिष्टलाई खाेज्दै आए म चुप रहें किनभने म कम्युनिस्ट थिइनँ त्यसपछि उनीहरू यहुदीलाई खाेज्दै आए म चुप रहें किनभने म यहुदी थिइनँ त्यसपछि उनीहरू क्याथाेलिकलाई खाेज्दैआए म चुप रहें किनभने म प्राेटेस्टेन्ट थिएँ त्यसपछि उनीहरू मलाई नै खाेज्दै आए मेराे लागि बाेलिदिने काेही थएन ।" -मार्टिन निमाेलर नेकपाका हरेक नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले आज पटकपटक पढ्नुपर्ने याे कविता अंश निकै मार्मिक छ । सरकारका हरेक मन्त्रीहरूले त झनै मनन गर्नु अपरिहार्य छ ।किनभने, हिजाे देशलाई बिकृति र बेथितिकाे दलदलमा पु-याउनेहरूकाे दुष्ट र अपराधिक हमला छानीछानी चलिरहेकाे छ । तिनले भ्र
अमेरिका, इटाली,फान्स जस्ता विशवका शक्तिशाली मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ । तर दक्षिण कोरियाले भने विभिन्नप्रविधीहरु अपनाएर कोरोनालाई नियन्त्रण बाहिर जान दिएको छ्ैन् । हालसम्म दक्षिण कोरियामा ९ हजार ५ सय ८३मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । १ सय ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५ हजार ३३ जना निको भएका छन् । एक्टिप केस ४ हजार हाराहारीमा रहेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन के गदैंछ कोरिया सरकार दक्षिण कोरियाले संंक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न प्रविधी अपनाएको छ । अन्य मुलुकहरु जस्ता लकडाउन कोरियाले गरेको छैन् । क डाउन गरेको छ । बाहिर निस्किदा दुव्यवहार गर्ने, पक्राउ गर्नु
१,४७९ पटक पढिएको
आदरणीय नेतृत्व,हार्दिक अभिवादन । हामी सबैलाई थाहा छ । यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि नै फैलिएको छ । यो कोभिड १९ नामक एक प्रकारको जीवाणु हो, जो एउटा प्रजातिबाट फरक–फरक ढंगले कोष विकास गर्दै मानव शरीरमा प्रवेश गर्छ । यसको संक्रमणलाई कोरोना भनिन्छ । पछिल्लोसमय यो हामी मानवजातिविरुद्धको हमलाको रूपमा हतियार बनेर प्रकट भएको छ । कोरोना संक्रमणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । आज बिहानसम्मको तथ्यांकानुसार अमेरिका, इटाली, स्पेनसहित पश्चिमा देशहरूलाई यसले आक्रान्त बनाएको छ । यसको सम्भावित संक्रमणबारे हामी सचेत छौँ, असरबारे त्रसित र चिन्तित छौँ । सरकारको जारी ‘लक डाउन&rsquo
आहा चित बुझदोे आर्शिवाद, दीर्घायु भवः । यो शब्दले हामी सबैको ह्दय, मन तथा आत्मालाई छुने गर्छ । मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश मध्ये आशिष पनि एक हो । के शरीरले जीवित राख्नु नै जीवन हो ?जब हामीलाई कसैले दीर्घायु हुनु भन्ने आशिष दिनुहुन्छ, कतिलाई त्यो क्षणले आनन्दित तुल्याउँछ भन्ने कतिलाई अपहेलित जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनकि त्यो व्यक्ति चाहन्छ पहिले तँ सोध्नु म कसरी बाँचिरहेको छु । यस्ता आर्शिवाद दिएर किन मेरा पुरानो घाँउ खोताल्दै हुनुहुन्छ । मेरो दिनचर्या कसरी व्यत्तित भइरहेको छ, तपाईलाई के थाहा ? तर यो सब कुरा आशिर्वाद दिने व्यक्तिलाई भन्न सकिदैन । आशिर्वाद दिने व्यक्तिको सोच सत्य थियो । द
आदरणीय नेतृत्व, हार्दिक अभिवादन । हामी सबैलाई थाहा छ– यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि नै फैलिएको छ । यो कोभिड १९ नामक एक प्रकारको जीवाणु हो, जो एउटा प्रजातिबाट फरकफरक ढंगले कोष विकास गर्दै मानव शरीरमा प्रवेश गर्छ । यसको संक्रमणलाई कोरोना भनिन्छ । पछिल्लोसमय यो हामी मानवजातिविरुद्धको हमलाको रूपमा हतियार बनेर प्रकट भएको छ । कोरोना संक्रमणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । आज बिहानसम्मको तथ्यांकानुसार अमेरिका, इटाली, स्पेनसहित पश्चिमा देशहरूलाई यसले आक्रान्त बनाएको छ । यसको सम्भावित संक्रमणबारे हामी सचेत छौँ, असरबारे त्रसित र चिन्तित छौँ । सरकारको जारी ‘लक डाउन&rsquo
हाल बिश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाइरस र यसले निम्त्याएको रोग कोभिड १९ को त्राहीमाम स्थिति हामी सबैलाइ थाहा नै छ। बिश्व अर्थ ब्यवस्था धरासयी हुने स्थितिमा देखिन्छ। बिश्व नै अहिले लकडाउनको अवस्थामा छन। यसको उत्पति र संक्रमण फैलिनुमा कुन बिश्च राजनितीक,आर्थिक वा सामाजिक प्रणालीले काम गरेको छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा भने छैन। शुरुमा चीनमा कोरोना कहर चलिरहदा पश्चिमा मुलुक बिषेश गरी अमेरिकाले हालको शक्तिशाली राष्ट्रको हिसाबले गर्नु पर्ने सहकार्य लगायत मानबीय सहायता सम्म पनि नगरी ट्रम्प आफैले पनि उल्टो चीनलाइ गिज्याउने शैलीमा उडाउन थाले।चीनले यस भाइरसको एक्लै सामना गर्यो र तुल
१,०९६ पटक पढिएको
शिक्षाका सबै चिज शिक्षकसँग ठोक्किन्छन् । शिक्षा बनाउने कि भत्काउने, उकास्ने की थेचार्ने, दौडाउने की घिसार्ने, पिलाउने की पिउने चिज बनाउन सक्ने बनाउने यी सबै शिक्षकको हातमा छ । समाज चाहे सामन्तवादी होस् चाहे पँुजीवादी वा समाजवादी नै किन नहोस् शिक्षामा समाजको प्रतिविम्बन गर्ने काम शिक्षकले गर्छन् ।समाजवादी शिक्षाका प्रमुख संवाहक शिक्षक हुन् । अक्टोबर क्रान्ति पछि पूर्व सोभियत सङ्घमा लेनिनले शिक्षकलाई समाजवादी मूल्य मान्यताको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने र रक्षा गर्ने प्रमुख शक्तिका रूपमा लिए र सोहीअनुसार जिम्मा पनि दिए । क्रान्तिपछि क्रुप्सकायाले विकास गरेको शैक्षिक मोडेल लागू गरे र त्यसमा शिक्षकल
विश्व कोरोनाको आतंकबाट त्रसित छ । महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि कोरोनाको प्रकोपबाट बच्न सकेका छैनन् । केही दिन अघि मात्र विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल कोरोना प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । तर हर्षको कुरा अहिले सम्म कोरोना संक्रमणले नेपालमा प्रवेश पाईसकेको छैन । यस परिस्थितिमा नेपालमा प्रवेश गर्ने कोरोनाले मधेश एवं आम मधशीहरूलाई प्रभावित गर्दैन भनेर चुपचाप बस्नु मुर्खता हुनेछ । किन कि कोरोना प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमै मधेश पर्छ । जहाँको स्वास्थ संस्थाहरू सबल छैनन् । मधेशी जनतामा स्वास्थ एवं सरसफाईकोे चेतना स्तर कमजोर रहेको पाइन्छ । अतः मधेश अन्य क्षेत्र भन्दा थप जोखिममा छ । कोरोना प्र